I-Ocean View Miraflores -Ifulethi Elizimele - I-Airbnb
I-Ocean View Miraflores -Ifulethi Elizimele
Miraflores, Municipalidad Metropolitana de Lima, i-Peru
U-Orlando Ungumbungazi ovelele
Ifulethi linombono omangalisayo nonethezekile wogu lwe-Pacific Ocean kanye nokubukeka okuhlaba umxhwele kwezinkantolo zethenisi kanye namapaki amahle azungeze i-boulevard. Iyunithi inikeza ikamelo lokulala elihle neliyindilinga elinombhede omkhulu kanye negumbi lokugezela langasese, i-balcony evulekile ijabulisa ukubona indawo futhi yenza kube nomoya wokuphumula ukuze uhlale nje, uphumule futhi ujabulele ukubuka indawo. Uma umsebenzi uyilokho okukuletha lapha, lokhu kuzoba yindawo enhle yokuthola ukuphumula okuhle ngemva kosuku olude lwebhizinisi
I-inthanethi enejubane eliphakeme elingenantambo iyatholakala kuyo yonke iyunithi. I-Cable TV enamashaneli we-Cable nayo iyatholakala. Kukhona umshini wokuwasha/wokomisa olahlwayo.
4.73 out of 5 stars from 92 reviews
4.73 · 92 okushiwo abanye
I-Miraflores iyindawo engcono kakhulu ongayichitha izinsuku zakho ngenkathi uvakashela i-Lima. Ifulethi lisendaweni ekhethekile kakhulu, lizungezwe amapaki, ukubukeka kolwandle kanye nezakhiwo zokuhlala.
Ngizotholakala isikhathi esiningi osukwini, uma ngasizathu simbe ungakwazi ukungithinta ngingumnikazi wehhotela le-boutique eliseduze futhi izisebenzi zami zizoba kwisevisi yakho 24/7.
UOrlando Ungumbungazi ovelele